Kunze Kwekunze Grill Kuronga - YiXing International Logistics (GuangDong) CO., LTD
FBA FCL neGungwa
FBA LCL Negungwa
FBA Kutumira FCL, LCL
Kunze MaBarbecues anotumirwa kuUnited States / Europe
Mr. Lu vakawana YiXing Global Logistics paInternet. Aifanirwa kutumira batch yekunze barbecue hovhoni kuUnited States nguva pfupi yadarika. Sezvo chiri chekutanga kuendeswa kuUnited States, VaLu havanyatso ziva nekutakura uye vane mibvunzo yakawanda. Kuburikidza nekutaurirana kuri nyore nemaneja Peggy, VaLu vakasiyawo ruzivo rwekuonana uye vaida kuziva nzira chaiyo yekutumira kuUnited States. Maneja Peggy akaziva kuti huwandu hwevheni yekunze yaVaLu yekubhabheji ingangoita masere masere, uye inofanira kutumirwa kukero yepachivande muNew York, United States. Saka ndakataurirana naVaLu, ndikatsanangurira Mr. Lu nemoyo murefu nezve nzira chaiyo yekutakurwa kweLCL kuenda kuUnited States nenyaya dzakanangana nebasa, mushure mekutaurirana, VaLu vakafunga kuti ndaive nehunyanzvi, uye ndakagutsikana maitiro ebasa.
Zvinoenderana nemamiriro ezvinhu enhumbi dzaVaLu, ndakavataurira mutengo wemutoro wakawanda wakatumirwa kuUnited States, uye nhumbi dzose dzinobatanidzwa pasina imwe mari. Mushure memazuva mashoma ekufunga, VaLu vakasarudzawo kusarudza yedu yekutumira LCL sevhisi kuUnited States. Iniwo ndakabva ndarongedza mutyairi kuti atambire zvinhu padoor. Mushure mekutumira zvakachengeteka zvinhu zvaVaL kudura redu kuDongguan, ndakatorawo mifananidzo, ndikaongorora zvinhu, ndikagadzira masherufu emapuranga, ndokurongedza mumabhokisi. Mushure meizvozvo, ini ndicharonga kutumira kuUnited States kana zuva rekutakura rasvika.
YiXing Global logistics inotarisa kuAmerican kutakurwa kwegungwa, nemakore mazhinji echiitiko mukutakura zvinhu zvakawanda pakati peChina neUnited States, Europe, nguva yakatsiga nemutengo wakanaka, sarudza YXL Logistics sevhisi yekufambisa sevhisi kuUnited States, Europe, kuti hauna kana chekushushikana, unonetseka zvachose uye kuedza kuchengetedza.
YiXing Global Logistics inotarisana neFBA yekutanga-pass logistics sevhisi. Iyo kambani ine akapfuma FBA mashandiro ruzivo uye akakura kuendesa nzira. Kugamuchirwa kuti utaure nesu chero nguva, hotline yebhizinesi: Peggy Zhang nhare mbozha 17322126273, WeChat ID: 17322126273.
Ndezvipi zvikonzero zvinobata maAmazon ...
Mutengo weAmazon FBA yekudzosa sevhisi ...
MaAmazon anodzima sei mutengi asina kubhadharwa ...